Mihatony ny Krizy Politika ao Borondi, Ampanginina ny Mpitsikera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2017 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, Español, English
Borondey monina ao Nairobi, Kenya sy ny naman'i Borondi mitsipaka ny fe-potoana fahatelo ho an'ny filoha Pierre Nkurunziza. — avy amin'i Vincent Munga tao amin'ny Demotix.
Hatramin'ny tapaky ny taona 2015, raha nanambara ny fikasany hilatsaka hofidiana fanintelony ny filoha Borondey Pierre Nkurunziza, niatrika tsikera noho ireo famoretana ankapobeny nihatra tamin'ireo mpikomy, ary koa ny hetsi-panoherana sy ny mpanohitra ny governemanta. Na dia eo aza ny disadisa iraisam-pirenena sy ny fitontonganana goavana ara-toe-karena, toa nanamafy ny fanarahamasony ao anatin'ny firenena ny fanjakana, mangeja ireo mpitsikera sy ny fiarahamonim-pirenena manaramaso ny zava-misy.
Niampanga ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpikatroka Imbonerakure (sampan'ny tanora ao amin'ny antokon'ny mpitondra) ao Borondi ho nahavita heloka bevava ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny firenena sy iraisampirenena, ny mpanao gazety, ary ny manampahefana ao amin'ny Firenena Mikambana, anisan ‘izany heloka bevava izany ny herisetra ara-pananahana sy ny fampanjavonana olona, arahin'ny fametrahana ho tsimatimanota ireo “tsy mpanara-dalàna”. Marobe ireo mpanohitra nandositra, indrindra ireo “mpikomy” tao amin'ny distrikan'i Bujumbura, ka nahatonga ireo mpanohitra an-tsesintany hizarazara, ary nahatratra 328.000 ny fitambaran'ny mponina mpitsoa-ponenana vao haingana teo.
Ny tatitra Novambra 2016 avy amin'ny Federasiona Iraisampirenena mpiaro ny Zon'Olombelona sy ny Ligy ITEKA dia namariparitra ny famoretana ara-politika izay niova tamin'ny taona 2016, niova ho herisetra “ambadiky ny varavarana mihidy”, tahaka ny fanagadrana miafina ilay famoretana imasom-bahoaka. Notsipahan'ny manampahefana ireo tsikera ireo, namaly izy ireo fa diso izany ary mifototra amin'ny tsaho.
Henjana ny disadisa nandritra ny fitondran'ny Filoha Nkurunziza
Nifehy tsikelikely ny antoko sy ny fanjakana – tamin'ny dingana izay nohafainganina taorian'ny tsy fahombiazan'ny fanonganam-panjakana an'ilay mpiady anaty akata taloha tamin'ny volana Mey 2015 ireo mpanohana hiringiriny ny filoha Nkurunziza izay tsy matoky ny dinam-pandriampahalemana sy ny fifampizaram-pahefana taorian'ny ady nifanaovana.
Vao haingana ny filoha Nkurunziza no nilazalaza fanovana lalàmpanorenana hahafahany mijanona hatramin'ny fe-potoam-piasana faha-efatra, araka ny tatitra avy amin'ny gazety tsy miankina Iwacu. Nilaza tamim-piahiaahina i Jean Minani, mpitondratenin'ny fiaraha-mitantan'ny mpanohitra CNARED (Filan-kevim-pirenena ho fanatanterahana ny Dinan'ny Fandriampahalemana sy Fihavanam-pirenena ary ny Lalàmpanorenana) – fa mety hitombo ny fifandonana:
Faced with a man determined to bury the Arusha Accord [post-war peace agreement] and the constitution, to remain in power forever, it seems to me that there is no other choice than to use all means to foil his plan..
Manoloana ny lehilahy vonona handevina ny Fifanarahana Arusha [fifanarahana fandriampahalemana taorian'ny ady] sy ny lalàmpanorenana mba hijanona mandrakizay eo amin'ny fahefana, toa hitako fa tsy misy safidy hafa ankoatra ny mampiasa ny fomba rehetra hanoherana ny fikasany.
Maro ireo mpanao gazety sy mpikatroka nandositra ny firenena, ary tsy hita mihitsy aza ny sasany, tahaka ilay mpanao gazety Jean Bigirimana, izay tamin'ny volana Jolay no nahitàna azy farany. Natolotra ny masoivohon'i Borondi ao Paris tamin'ny Oktobra ny fanangonan-tsonia nataon'ny RSF hitakiana fanadihadiana feno momba ny fanjavonany, saingy zara raha misy valiny izany.
Ireo mpanao gazety tafajanona ao Borondi kosa dia tsy maintsy misoratra anarana ao amin'ny Filan-kevitra misahana ny Fifandraisana ao amin'ny Firenena mba ahafahany manao ny asany. Nosamborin'ny manampahefam-panjakana ihany koa ireo mpiserasera WhatsApp noho ny fiampangana fanalam-baraka, izay lazain'ireo mpitsikera fa anisan'ny famoretana ny fahalalahana maneho hevitra.
Mbola mikatona ireo radio tsy miankina rmaromaro hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana tsy nahomby. Niverina niasa ny radio Isanganiro tamin'ny fiandohan'ny taona 2016, saingy fehezin'ny fepetra sasany, naato ny fandaharana antso an-tariby noho ny fandefasana hira Kirundi mankalaza ny zon'ny mpanao gazety. Nitatitra ihany koa ny SOS Médias Burundi tamin'ny Desambra fa niditra an-tsehatra nanakana ny fanangonam-baovao momba ny fanovana ara-pitsarana eo amin'ny tafika noho ny antony ara-piarovana ny minisitera, fanangonam-baovao nalefan'ny radio Isanganiro voalohany tamin'ny teny Kirundi.
Nanambara ny Fikambanan'ny Mpiangaly Mozika Borondey, nankatoavin'ny Filan-kevitry ny Fifandraisana ao amin'ny Firenena, vao haingana fa natao hanivanana ireo hira nalefa ka “manohintohina ny fandriampahalemana” izany. Na izany aza, notoherin'ny minisitry ny kolontsaina izany avy eo.
Miatrika olana sarotra ihany koa ny fikambanana firaisamonim-pirenena “atao fitaovana politika”- indrindra ny hetsika “Halte au troisieme mandat (Atsaharo ny fe-potoana fahatelo)”. Fikambanana dimy no nesorina tanaty lisitra tamin'ny 19 Oktobra, anisan'izany ny Fikambanana malaza ho Fiarovana ny Zon'olombelona sy ny Olona voafonja (APRODH) noho ny “fanakorontanana ny fiarovana” sy ny “fandotoana” ny endrik'i Borondi. Tamin'ny 24 Oktobra, naato ihany koa ny Sendikan'ny mpanao gazety Borondey sy ny fikambanana maromaro mpiaro ny zon'olombelona, anisan'izany ny Ligy ITEKA.
Nifarana ny fanadihadiana nataon'ny fanjakana tamin'ireo vondrona fiarahamonim-pirenena sasany, saingy nitatitra ny tsy fitokisan'ny tale iray ho afaka hiasa malalaka ny SOS Médias Burundi.
Vao haingana ihany koa ny Antenimieram-pirenena no nandany lalàna manaramaso mafy ny hetsiky ny fikambanana tsy miankina iraisampirenena ary mametra ny fahafahan'izy ireo handray fanampiana ara-bola. Miampy ny fanapahan'ny governemanta ny fiarahamiasa amin'ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisampirenena sy ny UNHCR, mampiseho izany fa manalavitra ireo andrim-panarahamaso ny toe-draharaha ao an-toerana sy iraisampirenena ry zareo.
Nipoitra tany an-tsekoly ihany koa ny fikasana hifehy ireo fitantarana manjaka. Tamin'ny fotoam-pahavaratra teo, nosamborina ireo tanora mpianatra noho ny fanampian-javatra ambonin'ny sarin'ny filoha tamin'ny kahie. Voatsikera noho ny famadihana tsy araka ny tokony ho izy ny raharaha fitsipiky ny sekoly ho heloka bevava izany. Nitatitra ihany koa ny SOS Médias Burundi fa mpianatra maherin'ny 200 no voaroaka tao amin'ny sekoly iray ary hatramin'ny 16 Jona izany, farafahakeliny mpianatra 580 avy amin'ny ny sekoly 4 no voakasiky ny “tranga fanoritsoritana ambonin'nysary”. Nilaza ny governoram-paritra Emmanuel Niyungeko fa ara-drariny ny sazy henjana satria nanao “fahadisoana lehibe” ny mpianatra, satria “lefitr'Andriamanitra” i Nkurunziza
Nanambara ny fanisana ny foko niavian'ireo mpiasam-panjakana ihany koa ny manampahefana mba hanajana ny fetr'isa ara-poko taorian'ny ady, natao hiantohana fa voasolotena tsara.ny Hutus sy ny Tutsis. Saingy satria tsy natao hihitatra any amin'ny asa-panjakana rehetra izany, niahiahy ny sasany fa misy ny fitongilanana mamely ny Tutsi.
Toa nametraka fanarahamaso henjana manoloana ny krizy ny governemanta ao Borondi, saingy mampiseho ny fikasana vao haingana hamono ny Minisitry ny Fifandraisana Willy Nyamitwe sy ny famonoana ny minisitry ny tontolo iainana, Emmanuel Niyonkuru fa mbola lavitra ny filaminana sy ny fandriampahalemana.
Satria mitohy ny krizy ara-politika sy ara-piarovana, mitombo ny tsy fisiana ara-tsakafo sy ny olana ara-toekarena. Na izany aza, ny fihetsika tsara avy amin'ny mpanohitra ‘hiringiriny’ sy ny fitondram-panjakana, tahaka ny fanokafana indray ny haino aman-jery tsy miankina, dia mety hanampy hanalefaka ny fifandonana sy irosoana any amin'ny marimaritra iraisana mamokatra.